I-Chickpeas eziqholiweyo kunye neetapile kunye nee-ertyisi | Bezzia
I-Chickpeas eziqholiweyo kunye neetapile kunye nee-ertyisi
UMaria vazquez | 19/06/2022 10:00 | Imifuno
Los i-chickpeas eziqholiweyo kunye neetapile kunye nee-ertyisi esizicebisayo namhlanje zisenokungabi zezona zifanelekileyo ukwabelana ngamaqondo obushushu empelaveki edlulileyo, kodwa ngoku zibuyele kwimeko yesiqhelo zibonakala ngathi sisindululo esikhulu.
Iziqholo zinika uchuku olungaqhelekanga kwezi chickpeas ezisisiseko ekulula kakhulu ukuzilungiselela. I-Paprika, i-turmeric kunye ne-cumin abaniki nje incasa kuphela kodwa nombala omhle kwisosi yetumato abakhatshwa ngayo. I-tomato sauce onokuthi uyilungiselele ngeetumato ezivuthiweyo kunye neetumato ezinkonkxiweyo okanye kunye netumata etyumkileyo.
Ukuba uyabheja amantshontsho sele ephekiwe Akuyi kukuthatha ngaphezu kwemizuzu engama-30 ukulungiselela le recipe. Ingcebiso yethu kukuba xa sele uqalile, yenza inxalenye ephindwe kabini, ngoko uya kuba nokutya kweentsuku ezimbini ezitshintshanayo kwaye unokuphumla ekuphekeni. bajoyine ukuze a isaladi eluhlaza kwaye uya kuba nemenyu epheleleyo kakhulu.
2 Inyathelo ngesinyathelo
Iitumato ezi-3 ezikhutshiweyo
1/4 yetswele elimhlophe
I-1 clove yegalikhi
1 icephe leoli ye-olive eyintombi
1 itispuni yepepile
1 itispuni yepaprika
1/2 ithisipuni ikumin yomhlaba
1 itispuni turmeric
2 iitapile, diced
200 g. amantshontsho ephekiweyo
1 indebe yee-ertyisi
Beka ifayile ye- iglasi ye-blender iitumato, itswele, igalikhi, ioli yeoli kunye neziqholo: ipepile, paprika, turmeric kunye ikumin powder. Yongeza ityuwa kwaye ubethe de ufumane i-sauce.
Emva uthele i-sauce kwi-sauce kunye nobushushu.
Yongeza iitapile kwaye uxube.
Emva koko uthele amanzi upheke iitapile Ngexesha lemizuzu engama-15.
Ke yongeza ii-ertyisi kwaye upheke imizuzu emi-5 ngaphezulu okanye de iitapile kunye neeertyisi zenziwe.
Ukugqiba yongeza i-chickpeas ephekiweyo kwaye udibanise ukupheka yonke imizuzu embalwa ngaphezulu.
Ncedisa ii-chickpeas eziqholiweyo kunye namazambane ashushu kunye nee-ertyisi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Iresiphi » Imifuno » I-Chickpeas eziqholiweyo kunye neetapile kunye nee-ertyisi
Umahluko phakathi kwexhala kunye noloyiko
I-Microcement: yimathiriyeli efunwa kakhulu kwihlabathi lohlaziyo